Iiraan oo beenisay inay Alshabaab shixnado hub ah u soo daabuleen – idalenews.com
Iyadoo ay Guddiga QM ugu qaabilsan Kormeerka Cunaqabataynta hubka ee saaran dalka Somalia dhawaan shaciyeen inay Dowladaha Iiran, Yeman, Libya iyo North Korea taageero hub ah siiyaan Kooxda Alshabaab, ayaa waxay Dowladda Iiraan gaashaanka ku dhufatay arrinkaasi.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Iiraan, Ramiin Mehman-Parast ayaa si kulu u beeniyey Eedeymaha Dowladda Yeman ku sheegtay inay gacanta ku dhigeen Markab laga leeyahay dalka Iiraan oo shixnado hub ah u waday Kooxda Xuutiyiinta Yeman iyo Kooxda Alshabaab ee dagaalka kula jirta Dowladda Dhexe ee Somalia ee ay QM aqoonsan tahay.
Afhayeenka oo u waramayey Wakaalladda Wararka Iiraan ee Fars News Agency (FNA) ayaa shaaciyey inay Dowladiisa xushmaynayso Nabadd iyo Deganaanshaha Mandiqadda iyo Qaranimadda dalalka kale, wuxuuna dhinaca kale tilmaamay inaysan wax hub ah u dirin Kooxaha ka dagaalama Somalia iyo Yeman.
Hadalka Afhayeenka, ayaa ku soo beegmay iyadoo Madaxweynaha dalka Yeman, Abdu-rabbi Mansuur Alhadi isbuucii hore ku eedeeyey Dowladda Iiraan inay hub u soo dirto Kooxaha Xuutiyiinta iyo kuwa Alqaacidada ee Yeman, wuxuuna QM ka codsaday inay baaritaan ku sameeyaan shixnaddaha hubka ee ay Mariniska dalkiisa iyo kuwa Maraykanka qabteen, iyadoo ay hubkaasi ku jireen kuwo Iiraan lagu soo farsameeyey.
Is-bedel la filaayo in dhawaan lagu sameeyo Taliyayaasha Ciidamada Somalia